ငါဖြစ်၏ ငှားရမ်း ငါဖြစ်၏ ကားပိုင်ရှင်
သင်တစ်ဦးငှားရမ်းနေငှားရမ်းတောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါသင်တစ်ဦးငှားရမ်းတောင်းဆိုမှုကို Pre-အတည်ပြုသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ရန်ဖြစ်စေ options နှစ်ခုရှိသည်။
သင်ငှားရမ်းနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန်တစ်ဦး Message ပေးပို့ရန် "ကို Message" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ အကယ်. ဤငှားရမ်းထံမှသတင်းအချက်အလက်များရယူပြီးနောက်သင် Pre-အတည်ပြုတစ်ခုသို့မဟုတ်တောင်းဆိုချက်ကိုပယ်ချရမည်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ, တစ်ဦးလုံလောက်သောတုန့်ပြန်ဘူး။
အဆိုပါပိုမြန်သငျသညျ, ငှားရမ်းတောင်းဆိုမှုများဖို့ပိုမိုမြင့်မားသည်သင်၏တုံ့ပြန်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်! အမြဲတမ်းအားလုံးဘွတ်ကင်တောင်းဆိုမှုများမှချက်ချင်းတုံ့ပြန်ရန်ကြိုးစားပါ။
သင်တစ်ဦးငှားရမ်းတောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ, သင်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်သင့် RentaCar Club ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်မိုဘိုင်းနံပါတ်သို့ပို့အီးမေးလ်တစ်စောင် Notification နှင့် SMS ကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုရလိမ့်မယ်။ ဤအမက်ဆေ့ခ်ျများအပြင်သင်သည်သင်၏ RentaCar Club အကောင့်ပေါ်စာအုပ်အပိုင်းအတွက်ဆိုင်းငံ့ငှားရမ်းတောင်းဆိုမှုများလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
သင်တောင်းဆိုမှုကိုအတည်ပြုလျှင်တစ်ဦးငှားရမ်းတောင်းဆိုမှုကိုတွင်ထည့်သွင်းအဆိုပါရက်စွဲများကိုအလိုအလျောက်သင့်ရဲ့ပြက္ခဒိန်ပေါ်ပိတ်ဆို့ပါလိမ့်မည်, ဒီတော့ကတခြားငှားရမ်းသူတို့အားရက်စွဲများအဘို့အသင့်ကားကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်။ သင့်ရဲ့ပြက္ခဒိန်ကို update လုပ်ဖို့မလိုအပ်ရှိပါတယ်။